madaxweynaha uhuru kenyatta iyo madaxweynaha sudam cumar xasan oo kawa hadlay arimaha udhaxeeya labada dal. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
madaxweynaha uhuru kenyatta iyo madaxweynaha sudam cumar xasan oo kawa hadlay arimaha udhaxeeya labada dal.
Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka dagay garoonka diyaaradaha ee caasimada sudan ee Khartoum halkaas oo uu kula kulmay dhigiisa dalka Sudan xassan Omar al-Bashir oo ay ka wada hadleen arima la xiriira wadashaqaynta labada dal.
labadan masu’uul ayaa ku heshiiyay in ay iskaashadaan si loo xoojiyo amaanka iyo xasiloonida dalkaasii sudan.
madaxweyne kenyatta oo booqasha ku tagay dalka taliyaaniga ayaa waxaa uu kulama kala duwan kula yeeshay garoonka diyaadaha ee khartoum madaxweyne cumar al bashiir iyo qaar ka mid ah madaxda dalkaasii.
madaxweyne uhuru ayaa dhankiisa sheegay in kenya ay diyaar u tahay in ay si dhaw ula shaqeeyso xukuumadda dalka sudan si loo xoojiyo xiriirka u dhaxeeyo labada dal.
Kenyatta ayaa maalinkii shalay garoonka diyaaradaha ee Khartoum sidoo kale wadahadalo gaaban kula yeeshay qaar ka mid madaxda ugu sareysa ee dalka sudan halkaasoo la isku afgartay in labada dal ay iska kaashadaan sare u qaadida dhaqaalaha iyo xoojinta arimaha amniga ee quseeya dalalka kenya iyo sudan.
madaxweyne uhuru Kenyatta oo suxufiyiinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee khartoum ayaa ka dhawaajiyay in isaga iyo cumar xassan al bashiir ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii ay u dardargalin lahaayeen danaha shacabka ku nool labada dal.
madaxweyne uhuru ayaa waxaa uu ku celceliyay muhiimadda ay leedahay in la abuuro saldhigyo ay ku xooggan yihiin ciidamada labada dal waxaana uu farta ku fiiqay in Sudan iyo Kenya ay wadaagaan arima dhowr ah oo quseeya hormarka dhaqaalaha iyo xoojinta amaanka.
madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in uu kala hadlay xassan cumar al-Bashir arrimo dhowr ah oo ka mid ah in labada dal ay si dhaw iskula shaqeeyaan iyo in ay iska kaashadaan sugida amniga.